Famoronana (finoana sy fedrà) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Famoronana)
Ny famoronana na fahariana dia fedràm-piandohana itantarana ny fiandohan' izao rehetra izao: ny olombelona, ny tany, ny aina ary izao tontolo izao. Na dia misy zavatra itovizany ny fedrà sasany momba ny famoronana na ny fiandohana dia betsaka ny antsipiriany tsy mitovy arakaraka ny fivavahana na ny vahoaka tompon' ilay fedrà na fitantarana.
Famoronana ny mazava
1 Ny karazam-pahariana
1.1 Fahariana avy amin' ny tsy misy
1.2 Fahariana avy amin' ny korontana
1.3 Mpiteraka ny tontolo
1.4 Fahariana vokatry ny fisandratana
1.5 Ny mpaka tany anaty rano
2 Ny famoronana araka ny karazam-pivavahana
2.1 Ny famoronana araka ny fivavahana abrahamika
2.1.1 Ny famoronana araka ny jodaisma sy ny kristianisma
2.1.2 Ny famoronana araka ny finoana silamo
2.1.3 Ny famoronana araka ny finoana bahay
2.1.4 Ny famoronana araka ny fivavahana môrmôna
2.2 Ny famoronana araka ny fivavahana hafa
2.2.1 Ny famoronana araka ny hindoisma
2.2.2 Ny famoronana araka ny sikisma
2.2.3 Ny famoronana araka ny bodisma
2.2.4 Ny famoronana araka ny jainisma
2.2.5 Ny famoronana araka ny taôisma
2.2.6 Ny famoronana araka ny zôrôastrisma
2.2.7 Ny famoronana araka ny siantôlojia
3 Ny famoronana araka ny fedràn' ny vahoaka eto an-tany
3.1 Fedràn' ny vahoaka aty Afrika
3.2 Fedràn' ny vahoaka ao Amerika Avaratra
3.3 Fedràn' ny vahoaka ao Amerika Atsimo
3.4 Fedràn' ny vahoaka ao Eorôpa
3.5 Fedràn' ny vahoaka ao Atsinanana
3.6 Fedràn' ny vahoaka ao Atsinanana Akaiky
3.7 Fedràn' ny vahoaka ao Azia Atsimo-Atsinanana
3.8 Fedràn' ny vahoaka any Ôseania
Nadika avy amin' ny pejy amin' ny teny anglisy ity lahatsoratra ity.
Fahariana avy amin' ny tsy misyHanova
Ny fedrà izay mitantara an' Andriamanitra ho namorona izao tontolo izao avy amin' ny tsy misy (ex nihilo) dia foiben' ny finoana ao amin' ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny silamo, ary ny filôzôfa jiosy Maimônida tamin' ny Andro Antenantenany dia nahatsapa fa io ihany no hevitra itovian' ireo fivavahana telo ireo.
Na dia izany aza dia tsy hita ao amin' ny Baiboly hebreo manontolo izany fiheverana izany (creatio ex nihilo). Ny mpanoratra ny Genesisy na Jenezy (Gen. 1) dia tsy niresaka ny amin' ny niavian' ny raha (ny akora novan' Andriamanitra ho lasa ity tontolo azo onenana ity), fa nanome anjara asa mba hahafahan' izao rehetra izao hiodina. Tamin' ny taonjato faha-2 taor. J.K. dia tsikaritr' ireo Kristiana mpikaroka voalohandohany ny fifandrirotana eo amin' ny hevitra momba ny fiforonan' izao tontolo izao sy ny fahefan' Andriamanitra manao ny zavatra rehetra, ary tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-3 dia nanjary fototra teo amin' ny fiheveran' ny teôlojia kristiana ny famoronana avy amin' ny tsy misy.
Ny famoronana avy amin' ny tsy misy dia hita koa tao Egipta tamin' ny Andro Taoha, ao amin' ny Rig Veda, ary amin' ny kolontsain' ny mponina animista ao Afrika sy Azia sy Ôseania ary Amerika Avaratra.
Amin' ny ankabeazan' ireo fitantarana ireo, izao tontolo izao dia niforona tamin' ny alalan' ny teny na nofy na fofonaina na eritreritra madiodion' ny mpamorona, nefa ny famoronana avy amin' ny tsy misy dia niseho koa tamin' ny alalan' ny zavatra mivoaka avy amin' ny vatan' ilay mpamorona.
Ny fandikana ara-bakiteny ny hoe ex nihilo dia "avy amin' ny tsy misy" nefa amin' ny fedràm-pamoronana maro dia misy tsy misaraka mazava ny raha ny asa famoronana no hosokajina ho ex nihilo na famoronana avy amin' ny korontana (chaos). Ao amin' ny fedrà mitantara ny famoronana ex nihilo, ny hery sy sy ny raha anatanterahana ny famoronana dia avy amn' ilay mpamorona. Ny mpamorona toy izany dia mety hodidinin-javatra toy ny haizina na ny rano, nefa tsy mamorona avy amin' ireo zavatra ireo, amin' ny famoronana avy amin' ny korontana kosa, ny zavatra ampiasaina amin' ny famoronana dia efa misy rahateo miaraka amin' ny foana tsy misy endrika.
Fahariana avy amin' ny korontanaHanova
Amin' ireo fedrà momba ny famoronana avy amin' ny korontana (chaos), amin' ny voalohany dia tsy misy afa-tsy erana tsy misy endrika. Amin' ireo fitentarana ireo dia midika hoe "korontana" ny teny hoe chaos, ary izany erana tsy misy endrika izany izay atao hoe "ny foana" na "hantsana lalina", dia misy ny zavatra ilaina amin' ny famoronana. Ny chaos dia azo fariparitana ho manana fisiana toy ny etona na rano, tsy azo refesina, mety masira na mamotaka. Ireo fedrà ireo dia manambatra ny chaos amin' ny ratsy na ny fanadinoana, ka mifanohitra amin' ny "filaminana" (cosmos) izay tsy inona fa ny tsara. Ny asam-pamoronana dia fitondrana filaminana avy amin' ny korontana, ary amin' ny ankabeazan' ireo kolontsaina ireo dia inoan' ny olona fa amin' ny fotoana iray dia hihalefy ny hery mihazona ny filaminana sy ny endrika ka hiverina hilentika amin' ny hantsana laina indray izao tontolo izao. Ohatra iray ny hita ao amin' ny famoronana araka ny bokin' ny Genesisy (Gen. 1) ao amin' ny Baiboly.
Mpiteraka ny tontoloHanova
Misy karazany roa ny fedrà momba ny famoronana avy amin' ny fiterahana, nefa izy roa ireo dia mitantara ny fisarahana na ny fivakisan' ny zavatra niandohana, dia ny tontolo mpiteraka. Ny karazam-pedrà iray dia mitantara ny toetra tany am-piandohana ho fikambanana mandrakizain' ny ray sy reny, ary ny famoronana dia miseho rehefa misaraka izy roa ireo. Ireo ray aman-dreny ireo dia tsy inona fa ny Lanitra (matetika heverina ho lahy) sy ny Tany (matetika heverina ho vavy) izay nifamatotra mafy tany am-piandohana ka tsy nahafahan' ny inona na inona nipoitra. Ireo fedrà ireo dia mitantara ny famoronana ho toy ny vokatry ny firaisana ara-pananahan' ny mpivady, sady fitantarana ny tetiaran' ireo andriamanitra teraka avy amin' izany.
Ao amin' ny karazam-pedrà faharoa momba ny tontolo mpiteraka, ny famoronana dia avy amin' ny ampahany tafasaraka amin'ny vatan' ilay zavatra efa nisy rahateo tany am-piandohana. Matetika amin' ireo fitantarana ireo, ny rantsam-batana, ny volo, ny ra, ny taolana na ny taovan' ilay zavatra voalohany dia voatapatapaka na atao sorona mba hiova ho lanitra, tany, biby, na zavamaniry, sy singan-toetran' ny tontolo. Ireo fedrà ireo dia manantitra ny hery mpamorona ho hery ara-panahy ao amin' ny zavaboary fa tsy ara-pananahana, ka mitantara ny fa ny voahasina dia taharon-tsinga sy manontolon' ny tontolo voary. Ohatra iray amin' izany ny fedràm-pahariana an' ny vahoaka any amin' ny tapany avaratr' i Eorôpa, tantaraina ao amin' ny Gylfaginning, ao amin' ny tononkalo Völuspá ("filazàn' ilay vehivavy mpahita") indrindra.
Fahariana vokatry ny fisandratanaHanova
Ao amin' ity fedrà ity dia misandratra avy amin' ny tontolo hafa ho amin' ny tontolo onenany ankehitriny ny olombelona. Ny tontolo taloha dia matetika heverina ho kibon' ny reny-tany, ary ny firosoana amin' ny fisandratana dia ampitovina amin' ny fiterahana. Ny anjara asan' ny mpampivelona dia matetika sahanin' ny andriamani-bavy, sahala amin' ny vahivavy-hala ao amin' ny fedrà maron' ny Amerindiana. Mahalana no ahitana mpandray anjara lahy ao amin' ireo fitantarana ireo, ary ny mpikaroka dia matetika mihevitra azy ireo ho mifanatrika amin' ireo fedrà mitantara ny fisian' ny famoronana tanterahin' ny lahy, sahala amin' ny fedrà momba ny famoronana avy amin' ny tsy misy.
Ny fedrà momba ny fisandratana dia mitantara ny famoronana ny olombelona sy/na zava-mananaina hafa ho toa dingam-piakarana na fiovan-toetra avy amin' ny endrika nahaterahana mamakivaky tontolo ambany tany maro, ambara-pahatongany amin' ny toerana misy azy sy endrika ananany ankehitriny. Matetika ny fandalovana avy amin' ny tontolo na dingana iray mankamin' ny dingana manaraka dia atosiky ny hery anaty na ny fitsimohana na ny fitorontoronana avy amin' ny endrika tsaika niandohana. Izany karazana famoronana izany dia hita ao amin' ny kolontsain' ireo Indianan' i Amerika izay mampifadray ny fisandratana faran' ny olombelona (avy amin' ny lavaka mivoha mankany amin' ny tontolo ambany) amin' ny fitantarana momba ny fifindrà-monina vokatr' izany sy ny fiorenam-ponenany amin' ny taniny ankehitriny.
Ny mpaka tany anaty ranoHanova
Ny mpaka tany anaty rano dia mpandray anjara amin' ny asam-pamoronana amin' ny fedrà momba ny famoronana. Amin' ireo fitantarana ireo dia misy andriamanitra mandefa biby ao amin' ny rano fiandohana mba hisafidy fasika na fotaka hanamboarany tany azo onenana. Ny mpikaroka sasany dia manao fivoasana ara-psikôlôjia (mamantatra ny toe-pisainan' ny olombelona) ireo fedrà ireo fa ny hafa manao fivoasana ara-kôsmôgônia (momba ny fiforonan' ny tontolo). Amin' izy roa ireo dia anterina ny fiandohana avy any amin' ny lalina. Ny fedrà momba ny mpaka tany anaty rano dia fahita amin' ny lovantsofin' ny Amerindiana nefa mety ho hita koa ao amin' ireo vahoaka tsoky (na Tsoktsy: vahoaka any amin' ny farany atsinanana any Rosia) sy ny vahoaka iokagiry (vahoaka any Siberia), ny Tatara (isan' ny vahoaka torka) sy lovantsofina finô-ogriana maro.
Ny lasitry ny fitsinjaràn' ireo fedrà ireo dia toa manambara fa iray fototra any amin' ny faritra amorontsiraka atsinanana any Azia izy ireo, ka niely nanaraka ny fifindrà-monin' ny mponina miankandrefana mankany Siberia sy miantsinanana mankany Amerika Avaratra.
Mampiavaka ny fedràn' ny Amerindiana ny famoronana andraisan' ny mpaka tany anaty rano anjara; ireo fedrà ireo dia manomboka toy ny zava-manana aina sy endrika vonona ny hiseho maharitra matory na mihantona amin' ny fanjakana fiandohana. Ny mpaka tany anaty rano dia isan' ireo mifoha voalohany sy mametraka ny fototra ilaina amin' ny alalan' ny fanamboarana tany sahaza izay ahafahan' ny famoronana hoavy miaina. Amin' ny tranga maro dia manoritsoritra fifanjohiana andrana arahin-tsy fahombiazana ireo tantana ireo alohan' ny hisian' ny vahaolana farany.
Ny famoronana araka ny karazam-pivavahanaHanova
Ny famoronana araka ny fivavahana abrahamikaHanova
Ny famoronana araka ny jodaisma sy ny kristianismaHanova
Araka ny Baiboly, ny famoronana dia ilay asan' Andriamanitra tamin' ny alalan' ny teniny nampisy izao rehetra izao tany am-boalohany. Tantara miendrika angano (fedrà) ao amin' ny bokim-pivavahan' ny Jodaisma sy ny Kristianisma izany, dia ny Bokin' ny Genesisy (na Jenezy). Ny Bokin' ny Genesisy dia maneho fa Andriamanitra no namorona izao tontolo izao avy tamin'ny tsy misy, ka nametraka ny olona ho tampon' ny asa famoronana nataony. Ao amin'ny Bokin' ny Salamo dia voalaza fa nandahatra sy nandamina an' izao tontolo izao Andriamanitra ka nampisy fifandraisana mivantana eo amin' ny zavaboary rehetra.
Indroa miantoana ny tantaran' ny Famoronana ao amin' ny toko voalohan' ny Bokin' ny Genesisy. Amin' ny fitantarana voalohany dia i Elohim, anarana iombonana amin' ny teny hebreo lasa anaran-tsamirery iantsoana an' Andriamanitra, dia namorona ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy tao anatin' ny enina andro, avy eo niala sasatra, ary nitahy sy nanamasina ny andro fahafito. Ao amin' ny fitantarana faharoa, Andriamanitra, izay antsoina amin' ny anarana hoe Iahveh, dia namorona an' i Adama, ilay lehilahy voalohany, avy amin' ny vovo-tany sady nametraka azy tao amin' ny Saha Edena, izay nanaovany azy ho manam-pahefana amin' ny biby rehetra. Noforonina avy amin' i Adama i Eva, ilay vehivavy voalohany sady "mpanampy" ho an' i Adama.
Ny famoronana araka ny finoana silamoHanova
Ny famoronana araka ny finoana bahayHanova
Ny famoronana araka ny fivavahana môrmônaHanova
Ny famoronana araka ny fivavahana hafaHanova
Ny famoronana araka ny hindoismaHanova
Ny famoronana araka ny sikismaHanova
Ny famoronana araka ny bodismaHanova
Ny famoronana araka ny jainismaHanova
Ny famoronana araka ny taôismaHanova
Ny famoronana araka ny zôrôastrismaHanova
Nadika avy amin' ny lahatsorara amin' ny teny rosiana ity lahatsoratra ity.
Araka ny fiheveran' ny zôrôastrisma dia efa nisy hatry ny 12 000 taona izao tontolo izao. Mitsinjara ho vanimpotoana efatra samy maharitra 3 000 taona avy ny tantaran' izao tontolo izao manontolo.
Ny vanimpotoana voalohany dia fotoana nampisy mialoha ny zavatra sy ny hevitra. Tamin' izany dingana namoronana ny lanitra izany dia efa nisy ny môdelin' ny zavatra rehetra izay hoforonina ety an-tany aty aoriana. Izany toetran' ny tontolo izany dia atao hoe Menok ("tsy hita" na "ara-panahy").
Ny vanimpotoana faharoa dia heverina ho toy famoronana ity tontolo azo tsapain-tanana ity, hita maso, onenan' ny "zavaboary". Namorona ny lanitra, ny kintana, ny volana, ny masoandro, ny olombelona voalohany ary ny zava-mananaina hafa voalohany i Ahura Mazda. Ao ambadiky ny bola-masoandro no misy ny fonenan' i Ahura Mazda. Mandritra izany anefa dia nanomboka nihetsika i Ahriman. Nidirany ny efitry ny lanitra, namorona ny planeta sy ny kinta-manan-drambo izay tsy manaraka ny hetsika ranorain' ireo bolan-danitra. Nolotoin' i Ahriman ny rano, nalefany tamin' i Kayumars, olombelona voalohany, ny fahafatesana. Niteraka lehilahy iray sy vehivavy iray ilay olombelona voalohany, ka avy tamin' ireo no nivoahan' ny taranak' olombelona ary avy amin' ny zavamananaina voalohany ny biby rehetra. Ny fifandonan' ireo foto-javatra roa ireo (i Ahura Mazda sy i Ahriman) no nanombohan' izao rehetra izao nihetsika: lasa nitsiranoka ny rano rehetra, nitranga ny tendrombohitra, nihetsika ny zavatra eny amin' ny lanitra. Mba hanafoanana ireo asan' ny planeta mpanimba ireo dia nafatotr' i Ahura Mazda amin' ny planeta tsirairay ny fanahiny.
Ny vanimpotoana fahatelo dia mahafaoka ny fotoana mialoha ny fisehoan' ny mpaminany Zaratostra (na Zôrôastra). Mandritra izany vanipotoana izany no nihetsehan' ireo fanalon' ny fedrà tantaraina ao amn' ny Avesta, dia ny mpanjakan' ny andro volamena: Yima ilay Mamiratra, izay nanapaka fanjakana tsy misy hafanana na hatsiaka na fahanterana na fitsiriritana, noforonina ireo andriamanitra (deva) maro. Ity mpanjaka ity no nanavotra ny olona sy ny biby tamin' ny safodrano tamin' ny alalan' ny fanamboarany fialofana manokana. Isan' ireo olo-marina tamin' izany vanimpotoana izany ny mpitarika ny faritr' i Vishtaspa, dia ny masindahy mpiahy an' i Zaratostra.
Mandritra ny vanimpotoana fahefatra farany (taorian' i Zaratostra) isaky arivo taona, dia misy Mpamonjy izay tsy maintsy miseho amin' ny olombelona, izay miseho toy ny zanak' i Zaratostra. Ny farany amin' izy ireo, ny Mpamonjy Saoshyant, no hanapa-kevitra ny amin' ny hoavin' izao tontolo izao sy ny olombelona rehetra; hanangana ny maty izy, handrava ny ratsy ary handresy an' i Ahriman, aorian' izany dia hodiovina amin' ny alalan' ny ria-metaly mitsonika izao tontolo izao, ary izay sisa amin' izany rehetra izany dia hahazo ny fiainana mandrakizay.
Ny famoronana araka ny siantôlojiaHanova
Ny famoronana araka ny fedràn' ny vahoaka eto an-tanyHanova
Fedràn' ny vahoaka aty AfrikaHanova
Fedràn' ny vahoaka ao Amerika AvaratraHanova
Fedràn' ny vahoaka ao Amerika AtsimoHanova
Fedràn' ny vahoaka ao EorôpaHanova
Fedràn' ny vahoaka ao AtsinananaHanova
Fedràn' ny vahoaka ao Atsinanana AkaikyHanova
Fedràn' ny vahoaka ao Azia Atsimo-AtsinananaHanova
Fedràn' ny vahoaka any ÔseaniaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Famoronana_(finoana_sy_fedrà)&oldid=1043692"
Dernière modification le 9 Febroary 2022, à 05:08
Voaova farany tamin'ny 9 Febroary 2022 amin'ny 05:08 ity pejy ity.